Vakawanda muNyika Vanonzi Havanzwisise Chirwere cheAutism
Kunyangwe hazvo mwedzi waKubvumbi uchirangarirwa vanorarama ne Autism Spectrum Disorder, vamwe vabereki vanoti ruzhinji haruna ruzivo nezveAutism.
Amai Florence Chinhaire vane mwana aneAutism vanoti vanhu vazhinji havanzwisisi nekutambira dambudziko reAutism izvo zvinoita kuti kunyangwe hama dzepedyo dzifunge kuti zvine chekuita nechivanhu.
Vanoti zvakaoma zvikuru kurera mwana aneAutism sezvo zvaanoda muhupenyu zvichida mari zhinji.
Nekuda kwekuti munyika hapana zvikoro zvinotora vana vaneAutism, Amai Chinhaire nemurume wavo Gordon vakatanga chikoro chinobatsira vana vaneAutism chinonzi Pathway Autism Trust.
Amai Chinhaire vanoti vakachitanga nekuda kwekushaya kwekuisa mwana wavo uyo airambwa kuzvikoro zvakasiya-siyana mushure menguva pfupi. VaGordon Chinhaire vakatsigirawo kuti vanhu vazhinji munyika havanzwisisi kuti Autism chii.
VaChinhaire vanoti zvinoda mari zhinji kuchengeta mwana ane Autism izvo zvinotambudza vabereki vazhinji.
Imwe nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi Amai Hellen Mutambara vanova mukuru we Autism Organization of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti autism hutera hunokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotariswa kuti aite nekukura. Amai Mutambara vanotiwo hurumende hainyanyotaura nezvehutera hweAutism sezvinoitwa zvimwe zvirwere munyika.
MuHarare munenzvimbo nhatu chete dzinobatsira vana vaneAutism. Kunyangwe zvazvo bazi rezvedzidzo muhurongwa hutsva vachitaura zvekuona kuti mwana wese aenda kuchikoro ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvizhinji vana vanehurema hwakasiya-siyana vanosanganiswa mukirasi imwechete ivo vachida zvakasiyana-siyana.
Autism inocherechedzwa musi wa2 Kubvumbi gore rega rega.